10 चीजहरू तपाईलाई Pramiracetam- शान्के केमिकलको बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दछ
10 चीजहरू तपाईलाई Pramiracetam को बारे मा जान्नु आवश्यक पर्दछ
अगस्ट 20, 2020
Pramiracetam पाउडर रेसटम परिवारको व्युत्पन्न हो। यसको खोज र अस्तित्व १ 1970 s० को दशकमा भेटिएको थियो, पार्के डेभिस कम्पनीलाई धन्यवाद। के अन्य rattams यो nootropic बताउँछ यसको आणविक संरचना र उच्च क्षमता हो।
धेरै बर्षमा, pramiracetam प्रयोग सबै क्रोध भएको छ डिमेंशिया, अल्जाइमर रोग, र अन्य स्नायविक विकारको उपचारमा। S० र दशकको शुरुमा, त्यहाँ धेरै सफल क्लिनिकल परीक्षणहरू थिए, जसले मेमोरी नोक्सनलाई उल्टाउँदै प्रमिरसेटमको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्‍यो।
यस औषधि को वैधता अन्य nootropics को रूप मा कडा छैन। उदाहरण को लागी, तपाई सही कुरा गर्न सक्नुहुनेछ pramiracetam पाउडर किन्नुहोस् र अधिकारीहरूसँग काँधमा नलगाइकन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि तपाईं क्यानाडामा उत्पादन खरीद गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं कानूनी रूपमा यसलाई व्यक्तिगत प्रयोगको लागि आयात गर्न सक्नुहुनेछ। युरोपमा, pramiracetam पाउडर डिस्लेक्सिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर, र ADHD प्रबन्ध गर्नका लागि वैध प्रिस्क्रिप्शन अन्तर्गत मात्र उपलब्ध छ।
किन Pramiracetam यति लोकप्रिय छ?
Pramiracetam प्रयोग यसको सामर्थ्यका कारण नूट्रोपिक्स क्षेत्रमा लोकप्रिय छ। यो piracetam भन्दा times० गुना बढी प्रभावी छ। ड्रग्स सानो डोजको साथ पनि जादुई तरिकाले काम गर्दछ। यो अपेक्षाकृत लामो आधा जीवनको साथ अत्यधिक जैवउपलब्ध छ।
तथ्य यो हो कि तपाईलाई कुनै साइड इफेक्ट नहुन सक्छ pramiracetam अनुभव लाई सार्थक बनाउँछ। ड्रग कुनै पनि लत छैन। यो मानव शरीरमा सुरक्षित र राम्रोसँग सहनशील छ। त्यहाँ सफल मानव परीक्षणहरू छन् जुन यस Nootropic को प्रभावकारिताको लागि आश्वासन दिन्छ। यस बाहेक, यो सबै भन्दा rattams र अन्य संग राम्रो स्ट्याक नोट्रोपिक्स पाउडर.
Pramiracetam को अर्को प्लस प्राप्त गर्नु भनेको स्नीकरको एक जोडी किन्नु जस्तै हो। त्यहाँ कुनै सख्त कानूनहरू छैनन् जुन तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक छ, विशेष गरी अमेरिकामा।
कसरी Pramiracetam काम गर्दछ?
Pramiracetam फ्याट घुलनशील Nootropic फैटी एसिड मार्फत रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्दछ। योसँग उच्च जैव उपलब्धता छ र यो लगभग minutes० मिनेटमा शिखर एकाग्रतामा पुग्नेछ।
यस स्मार्ट औषधिले हिप्पोक्याम्पसमा क्लोन अपटेकमा बृद्धि गर्दछ। त्यसकारण, यसले अप्रत्यक्ष रूपमा एसिटिचोलिन (एसीएच) को विमोचनलाई नियमित गर्दछ, जुन धेरै मस्तिष्क कार्यहरूको लागि जिम्मेवार हुन्छ।
ACh दीर्घकालिक मेमोरीको गठन र धारणाको लागि जिम्मेवार छ। यसका साथै न्युरोट्रान्समिटरले सेरेब्रल रक्त प्रवाहमा वृद्धि गर्दछ जुन अनुभूतिलाई सुधार गर्ने एक कारक हो।
Pramiracetam को प्रयोग के हो?
युरोपमा, Pramiracetam प्रयोग डिमेन्शियाको उपचारमा अनुमति छ। यो न्यूरोप्रोटेक्टिव स्मार्ट ड्रग दीर्घकालीन स्मृति बृद्धि गर्न र संज्ञानात्मक कार्यहरूलाई बढावा दिन कुशल छ। अमेरिका र क्यानडामा विद्यार्थीहरूले प्रमीरासिटाम पाउडर अफ-लेबल प्रयोगका लागि अध्ययन औषधिको रूपमा खरीद गर्छन् जब प्रमुख परीक्षाको लागि बोनस दिन्छन्।
१ 1979। In मा यसको विकास भएदेखि, प्रमिरसेटम न्यूरोडोजेरेरेटिव रोगहरू र मस्तिष्कको आघात वाले बिरामीहरूका लागि पर्चेको औषधि हो। यसको लक्षित बजार मुख्यतः बुजुर्ग हो तर स्वस्थ मानिसहरू प्रमिरसेटम अनुभवमा सामेल भएका छन्, विशेष गरी उनीहरूको अध्ययन र व्यवसायमा उनीहरूको उत्पादकता बढाउनका लागि।
Pramiracetam का प्रभाव र लाभहरू
मेमोरी सुधार गर्दछ
Pramiracetam संदर्भ मेमोरी बढ़ावा दिन्छ। वैज्ञानिकहरूले यी नूट्रोपिक्सलाई केवल मूरिन मोडेलहरूमा मात्र नभई मानव विषयहरूमा पनि परीक्षण गरेका छन्।
औषधीले हिप्पोकैम्पसलाई उत्तेजित गरेर नयाँ सम्झनाहरू सिर्जना गर्न, पुरानोलाई कायम राख्न, र बिर्सिness्ग कम गर्न काम गर्दछ। धेरै विद्यार्थीहरूले यसमा आनंद लिन्छन् pramiracetam अनुभव परीक्षाको लागि अध्ययन गर्दा तिनीहरूको स्मृतिलाई बढावा दिन।
संज्ञानात्मक रोगहरूको व्यवस्थापन
त्यहाँ थुप्रै क्लिनिकल परीक्षणहरू छन् जसले डिजेनेरेटिव रोगहरूलाई रोक्न मा Pramiracetam पाउडरको दक्षता प्रमाणित गर्दछ।
Pramiracetam लाभ डिमोन्शिया बिरामीहरु लाई अम्नेसिया उल्टाउँदै र स्मरणशक्ति बढाउँदै। युरोपमा उदाहरणका लागि स्मार्ट ड्रग भनेको अल्जाइमर रोगको व्यवस्थापनको लागि कानुनी पर्चा हो।
लिएर pramiracetam क्याप्सुलले तपाइँको न्युनन्स लाई बचाउनेछ। नूट्रोपिकले सेरेब्र्रोवास्कुलर मूलको मस्तिष्क आघातबाट पीडित बिरामीहरूलाई संज्ञानात्मक विकारहरूलाई उल्ट्याउँछ। अधिक के हो भने, यसले संज्ञानात्मक गिरावट कम गर्दछ जुन स्कोपोलमाइन जस्ता एमनेसिक ड्रग्सको जोखिमको कारण हुन सक्छ।
उच्च शिक्षा क्षमता
धेरै अध्ययनहरूले पुष्टि दिन्छ कि pramiracetam nootropic ड्रग्स लिने स्थानीय शिक्षा बढाउनेछ। यो एक हो संज्ञानात्मक वृद्धिकर्ता यसले तपाईंलाई चीजहरू सजिलैसँग समात्नेछ।
Nootropic हिप्पोक्याम्पसमा नाइट्रिक अक्साइड सिंथेसको गतिविधि बम गर्छ। यस न्युरोट्रान्समिटरले संज्ञानात्मक विकारहरूलाई हटाउँदछ र यसले सिक्ने र मेमोरीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले मस्तिष्कलाई रगतको आपूर्ति बढाउँदै न्यूरोनल गतिविधिहरूलाई परिमार्जन गरेर काम गर्दछ।
प्रमीरासिटामले एसिटिल्कोलिनको उत्पादन बढाएर केन्द्रीय स्नायु प्रणालीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ, जसको शिक्षामा पनि हात छ। यस बाहेक, तपाईंसँग तीव्र, सावधानी, र सतर्कता हुनेछ।
सिफारिश गरिएको Pramiracetam पाउडर खुराक जब एक्लो प्रयोग गरिन्छ
एक सामान्य दैनिक pramiracetam खुराक 400mg र 600mg बीचमा छ। अवस्थित क्लिनिकल अध्ययनहरूमा, विषयहरू १२०० मिलिग्रामसम्म लिन्छन् स्मार्ट ड्रग, प्राथमिकता भोजन पछि।
किनकि pramiracetam पाउडर एक अलि लामो आधा जीवन छ, तपाईं खुराक दुई मा विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपाय फार्माकोफोबिक समूहको लागी एक फाइदा हो। तीन दिन प्रति खुराक एक अन्तिम विकल्प हुन सक्छ तर तपाईं सुत्नु भन्दा पहिले आफ्नो प्रिस्क्रिप्शनको केही घण्टा निर्धारित गर्नु पर्छ। तपाईं आफ्नो सर्केडियन ताल संग गडबड गर्न चाहनुहुन्न।
तपाईं Pramiracetam खरीद गर्न सक्नुहुन्छ क्याप्सूल वा गोली फारममा। पाउडर फ्याट-घुलनशील छ, त्यसकारण, यसलाई तपाईंको पेयमा थप्नु राम्रो विचार हुनेछैन। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं यसलाई नरिवल तेल वा कुनै अन्य लिपिडमा विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ तीक्ष्ण स्वाद द्वारा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाइँले अप्ट इन गर्नुपर्छ pramiracetam क्याप्सूल।
एक नौसिखिया को रूप मा, तपाईं सहनशीलता र प्रभावहरूको लागि आफ्नो शरीर निगरानी रूपमा कम सम्भावित खुराक बाट शुरू गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। त्यस पछि, तपाईले आफ्नो प्राथमिकतामा डोज समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ र केही थप्न पनि सक्नुहुन्छ pramiracetam स्ट्याक्स.
Pramiracetam साइड इफेक्ट तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ
अन्य रेसट्याम्स विपरीत, Pramiracetam साइड इफेक्ट विरलै हुन्छ। तपाईको शरीरले पूरै खुराक सहन गर्न सक्दछ।
तपाईं ट्रान्जिटरी लक्षणहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै pramiracetam टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, अनिद्रा, जठरांत्र समस्या, वा आन्दोलन। जे होस्, तपाइँ प्रमीरासेटम खुराक घटाएर प्रतिकूल साइड इफेक्टबाट बच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ बारम्बार टाउको दुखिरहनु भएको छ भने तपाईलाई कोलोनले स्ट्याक गर्नु पर्ने हुन्छ।
पिरासिटाम रेसटम परिवारमा सबै अन्य नूट्रोपिक्सको पूर्ववर्ती हो जुन यसको स्थापनाको सुरूवात १ 1970 early० को दशकको शुरुमा भएको थियो। यसको विपरित, pramiracetam स्मार्ट औषधि को एक व्युत्पन्न छ।
यी दुई रेसट्यामको समान प्रभावहरू छन्। जे होस्, तिनीहरू तिनीहरूको आणविक संरचना र शक्ति संग फरक छ। उदाहरण को लागी, pramiracetam स्मार्ट औषधि 30 गुणा शक्तिशाली र यसको पूर्ववर्ती भन्दा बढी कुशल छ। के अधिक छ, नूट्रोपिकसँग उच्च जैव उपलब्धता छ।
Pramiracetam स्ट्याक्स सल्लाह
Pramiracetam ले अन्य nootropics को प्रभावहरुलाई कमै पार्दछ। यो प्रति सेन्टर एक शक्तिशाली औषधि हो तर तपाईं यसलाई अन्य रेसट्यामहरू र कोलिनेर्जिक पूरकहरूसँग स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं नूट्रोपिक्स डोमेनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि प्रयास गर्न हतारमा हुनुहुँदैन pramiracetam स्ट्याक। सबै पछि, यो स्मार्ट औषधि अझै पनि एकल एक्लो पदार्थको रूपमा कार्य गर्दछ। एक पटक तपाईंको प्रणाली pramiracetam को प्रभावहरु का सामना गर्न सक्छन्, तपाईं यसलाई अन्य Nootropics संग जोड्न स्वतन्त्र हुनेछ।
कोलिनेर्जिक पूरकहरू यस स्ट्याकि inमा उत्कृष्ट हुन्छन् किनकि उनीहरूले प्रमीरासिटाम टाउको दुखाइको पुनःनिर्माण गर्छन्।
Pramiracetam र Oxiracetam स्ट्याक
यस स्ट्याकले निस्सन्देह ध्यान केन्द्रित गर्न, सतर्क रहन, र तपाईंको विगतमा फर्काउने क्षमतालाई दुई गुणा पार्नेछ।
को प्रत्येक इकाई को लागी oxiracetam, तपाइँ pramiracetam क्याप्सूल को चार इकाइहरु लिन पर्छ। उदाहरणको लागि लिनुहोस्, यदि तपाईंको स्ट्याकमा ira००mg pramiracetam खुराक समावेश छ, तपाईंले २००mg oxiracetam समावेश गर्नु पर्छ।
२०० मिलीग्राम ऑक्सिरासिटाम
300 मिलीग्राम कोलोन
Pramiracetam र Aniracetam स्ट्याक
मस्तिष्कको कार्यक्षमतालाई उत्तेजित गर्नुका साथै यी दुई रेसट्यामहरूले चिन्ता, नकारात्मकता र डिप्रेशनबाट वञ्चित गर्दछ।
एनिरासिटामसँग यसको समकक्षको तुलनामा छोटो आधा जीवन छ। तसर्थ, यो समय मा लात र तपाइँ pramiracetam लाभहरु अनुभव गर्न अघि अभिनय सुरु गर्दछ। यी दुई स्ट्याकिंग पनि तपाईंलाई एक nootropic सहिष्णुता विकास देखि रोक्न हुनेछ।
प्रत्येक pramiracetam खुराक को लागी, तपाइँ को लागी लगभग 600mg aniracetam को आवश्यकता हुनेछ।
Pramiracetam र अल्फा GPC स्ट्याक
यो pramiracetam स्ट्याक एसिटिचोलिनको अन्तिम स्रोत हो। यसले दिमागका कार्यहरूलाई बढावा दिन्छ तर यसले मेमोरीमा पनि सुधार ल्याउँछ। अल्फा GPC को प्लस यो अत्यधिक जैवउपलब्ध छ किनकि यसले रक्त-मस्तिष्क अवरोधलाई कुशलताका साथ पार गर्दछ।
GPC कोलोन उपचारको साथ पूरक। केहि प्रमिरसेटम साइड इफेक्टहरू जस्तै टाउको दुख्ने। यस बाहेक, यसले न्युरोन्सलाई कायाकल्प गर्दछ, परिणित सेल झिल्लीको मर्मत गर्दछ, र एसिटाइलिन संश्लेषण गर्दछ, जुन मेमोरीका लागि जिम्मेवार महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर हो।
तपाईको दैनिक खुराकका लागि तपाईलाई करीव m००mg को आवश्यक पर्दछ अल्फा GPC पूरै।
400mg अल्फा GPC पूरक
Pramiracetam coluracetam स्ट्याक
कोलोरासिटामले तपाईंको दिमागलाई आराम दिन्छ, ध्यान बढाउँछ, र दीर्घकालीन स्मृति पुनर्स्थापित गर्दछ। यसले न्युरोनल कोशिकामा कोलीनको अप्टेक बढाउँछ। अधिक के हो, पूरक आँखाको दृष्टिको लागि राम्रो हो किनकि यसले अप्टिकल नर्भ र रेटिना क्षति मर्मत गर्दछ।
तपाईंको pramiracetam स्ट्याक को लागी, एक 30mg को कोलोरासिटाम पर्याप्त छ।
कसरी र कहाँ pramiracetam पाउडर किन्न?
तपाईं पाउडर, क्याप्सुल, वा गोली रूप मा nootropics pramiracetam खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट ड्रगले एफडीए द्वारा मान्य स्वीकृति प्राप्त गरेको छैन तर तपाईं अझै भर्चुअल स्टोरहरूमा यसको लागि रिमिज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ वरिपरि धेरै कालो बजारहरू छन् र त्यस्तै, तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं सम्मानित अनलाइन विक्रेताको लागि खस्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो अर्डर को लागी हामी मा बैंकिंग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीसँग वैध nootropics बेच्न को एक प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड छ। हामी सबैमा स्वतन्त्र प्रयोगशाला परीक्षण गर्छौं हाम्रा उत्पादनहरु हाम्रो सम्मानित ग्राहकहरु लाई उनीहरुलाई मार्केटिंग गर्नु भन्दा पहिले।
यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि किन अन्य रेसट्यामहरू भन्दा प्रमिरसेटम क्याप्सूल मूल्यवान छन्, म तपाईंलाई कारण दिन्छु। यो पदार्थ संश्लेषण एक ग्रीक पहेली को नजिक छ। यो प्रक्रिया अधिक नोटोट्रिक्सको संश्लेषणको बेला भन्दा बढी जटिल हुन्छ।
Nootropics pramiracetam तपाइँको सिकाई क्षमता को विस्तार को लागी एक शक्तिशाली स्मार्ट औषधि हो। यो दुबै उमेर र स्वस्थ मानिसहरूका लागि राम्रो विकल्प हो जुन ध्यान दिन, सतर्क रहन, र दैनिक कामहरूमा मानसिक स्थिरता चाहन्छ। पूरकले न्यूरोडोजेनेरेटिव अवस्थाका बिरामीहरूलाई तिनीहरूको हराएको मेमोरी पुन: प्राप्त गर्न र प्रत्येक विवरण कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
सबै नूट्रोपिक्सले पूर्वानुमान परीक्षणहरू पार गरिसकेका छन् तर मानव विषयहरूमा प्रयास गर्ने केही मध्ये प्रमिरासिटाम पनि हो। विभिन्न अनुसन्धान अध्ययनहरूबाट, यो स्पष्ट छ कि औषधि खपत को लागी सुरक्षित छ र शरीर मा राम्रो संग सहनशील छ।
म्याक्लिन, ए, कर्डेनास, डीडी, बर्गेस, डी, गामजु, ई (१ 1991 XNUMX १)। हेमेरी चोटपटी र anoxia को परिणामस्वरूप मेमोरी र संज्ञानात्मक समस्याको साथ जवान पुरुषहरूमा pramiracetam को प्लेसबो-नियन्त्रित अध्ययन। मस्तिष्क चोट
Corasaniti, MT, एट अल। (१ 1995 XNUMX)) प्रमीरासिटामको प्रणालीगत प्रशासनले मुसाको सेरेब्रल कॉर्टेक्समा नाइट्रिक अक्साइड सिंथेस गतिविधि वृद्धि गर्छ। कार्यात्मक न्यूरोलोजी।
टाकाचेभ, एभी (२०० 2007) दिमागको हड्तालको साथ बिरामीहरूको जटिल उपचारमा नूट्रोपिक एजेन्टको प्रयोग। Likars'ka sprava।
पग्स्ले, टीए, एट अल। (१ 1983 879) Pramiracetam (CI-XNUMX) को केही न्यूरो रसायनिक गुण, एक नयाँ अनुभूति-बढाउने एजेन्ट। औषधि विकास अनुसन्धान / खण्ड,, मुद्दा।।
अउटेरी, ए, ब्लेर्डी, पी। सेलास्को, जी।, सेग्रे, जी।, उर्सो, आर। (१ 1992 XNUMX २) मौखिक प्रशासन पछि स्वस्थ स्वयंसेवकहरुमा pramiracetam को फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलजी अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल।
क्लाउज, जेजे, एट अल। (१ 1991 XNUMX १) Alzheimer रोगमा Nootropic ड्रग्स: pramiracetam को साथ लक्षणात्मक उपचार।
चांग, ​​टी।, युवा, एमआर, Goulet, आरजे, र याकाटन, JG (१ 1985 XNUMX)। सामान्य स्वयंसेवकहरुमा मौखिक pramiracetam को फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलजीको जर्नल।
२. किन प्रमिरसेटम यति लोकप्रिय छ?
H.प्रमिरसेटमले कसरी काम गर्दछ?
W.प्रमिरसेटमको प्रयोग के हो?
The.प्रमिरासेटमको प्रभाव र फाइदाहरू
The. सिफारिश Pramiracetam पाउडर खुराक जब एक्लो प्रयोग गरिन्छ
7.Pramiracetam साइड इफेक्ट तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ
9.Pramiracetam स्ट्याक्स सल्लाह
१०. कहाँ र कहाँ pramiracetam पाउडर किन्न?
ग्यालेन्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड पूरक: यो अल्जाइमर रोगका लागि राम्रो औषधि हो?
Nootropics PRL-8-53: के यसले वास्तवमा मेमोरी र सिकाई क्षमता सुधार गर्दछ?
साइक्लोस्ट्रैजेनोल पूरक: लाभ, खुराक, सुरक्षा र अनुसन्धानहरू